पीएसएलः सन्दीपको बलिङ करियरकै उत्कृष्ट, आज कस्तो रहला? - Everest Dainik - News from Nepal
पीएसएलः सन्दीपको बलिङ करियरकै उत्कृष्ट, आज कस्तो रहला?
काठमाडौं, फागुन १६ । नेपाली क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) मा गरेको प्रदर्शन उनको टी–२० क्रिकेट करियरमा हालसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन बनेको छ। बुधबार पीएसएलमा आफ्नो तेस्रो खेल खेलेका सन्दीपले शानदार प्रदर्शन गर्दै ४ ओभरमा मात्र १० रन खर्चेर ४ विकेट लिए। विश्वकै उत्कृष्ट क्रिकेटर आवद्ध पीएसलमा २.५ को इकोनोमीमा बलिङ गरी, ४ विकेट लिनुसक्नु निकै दुर्लभ प्रदर्शन हो।
सन्दीप पाकिस्तानी सुपर लिगमा सन्दीप लाहोर क्वालान्डर्सबाट खेलिरहेका छन् । बुधबार उनको टोलीले लिगको अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको क्वेटा ग्लाडियटर्ससँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। सन्दीपले बुधबार अष्ट्रेलियाका शेन वाट्सन, दक्षिण अफ्रिकी खेलाडी रिली रोसौउ, उमर अकमल र डेनिस अजिजलाई आउट गराए ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः के–के हुन् सन्दीपको दिल्लीले उपाधि जित्ने ४ आधार?
सन्दीपले एकपछि अर्को गर्दै ४ विकेट लिएपछि उत्कृष्ट सुरुवात गरेको क्वेटाका कुनै व्याट्म्यानले खेललाई फर्काउन सकेनन्। क्वेटा सबै विकेट गुमाउँदै १०६ रनमा समेटियो। लाहोरले यो खेल ८ विकेटले जित्यो। सन्दीप यस खेलका ‘प्लेयर अफ दी म्याच’ भए।
लाहोरले खेलेका ६ खेलमध्ये पछिल्ला तीन खेल सन्दीपले खेल्न पाए । ३ खेल खेल्दा उनले ८ विकटे लिइसकेका छन्। उनले यस प्रतियोगितामा धेरै विकेट लिनेको सूचीमा पाचौं स्थानमा आफूलाई उभ्याइसकेका छन्।
एक इनिङमा उत्कृष्ट बलिङ गर्ने बलरको सूचीमा भने सन्दीप पहिलो नम्बरमा छन्। यसको मतलब सन्दीपले बुधबार गरेको बलिङ नै पीएसएल यस सिजनको अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो बलिङ हो। बलिङतर्फ समग्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेको सूचीमा पाकिस्तानका हसन अली पहिलो र सन्दीप दोस्रो स्थानमा छन्।
याे पनि पढ्नुस टी–१० क्रिकेट लिगः आज सन्दीपको टिम खेल्दै
पीएसएलको डेब्यु खेलमा सन्दीपले ३ विकेट लिए तर त्यो खेलमा गरेको बलिङ उनको करियरकै महंगो बलिङ बनेको थियो। उनले ४ ओभरमा ४६ रन दिएका थिए। दोस्रो खेलमा ४ ओभरमा १ विकेट लिएर २० रन मात्रै दिँदै बलिङ इकोनोमी सुधार गरेका उनले तेस्रो खेलमा टी–वीन्टी करियरकै उत्कृष्ट बलिङ गर्न सफल भए।
याे पनि पढ्नुस एपिएलमा पनि चम्किए सन्दीप, एकै ओभरमा लिए २ विकेट !
गतसालको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा मौका पाएपछि सबैजसो विदेशी लिगमा सन्दीपले खेल्ने अवसर पाएका छन्। आईपीएलपछि उनले टी–ट्वीन्टी फर्म्याटका लिगमा क्यानडा प्रिमियर लिग, क्याराबिन प्रिमियर लिग, बिग बास लिग, अफगानिस्तान प्रिमियर लिग, बंगलादेश प्रिमियर लिग खेलिसकेका छन् र हाल खेलिरहेको पाकिस्तान सुपर लिगसहित १ वर्षभित्र ७ विदेशी लिगमा खेल्ने अवसर प्राप्त गरे। त्यसबाहेक उनले गत नोभेम्बर यूएईमा भएको सबैभन्दा छोटो फर्म्याटको क्रिकेट टी–१० लिग पनि खेले। सन्दीपको टिमले आज सातौं खेलमा कराँची किंग्सविरुद्ध खेल्दैछ । खेल नेपाली समयअनुसार राति ९ः४५ बजेदेखि शुरु हुनेछ ।